Arkiifiyada Xayawaanka • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn xayawaanka
Sharciga cusub ee Michigan wuxuu u oggol yahay xayawaannada inay ka wada hadlaan CBD inay ikhtiyaar u leeyihiin milkiilayaasha xayawaanka
Badhasaabka Michigan wuxuu saxeexay sharci u oggolaanaya dhakhaatiirta xoolaha inay kala hadlaan CBD mulkiilayaasha xayawaanka si loo siiyo ...
CBD ma dheereyn kartaa cimrigaaga? Cilmi-baaris cusub oo CBD ah oo ku saabsan 3500 dirxiga ayaa ka sheekeynaysa wax badan.
Kobcinta Canopy Corp. dhawaan dhameystiray mid ka mid ah daraasadihii ugu horreeyay ee CBD ee ku saabsan saameynta nololeed ee isticmaalka CBD lana ogaaday ...
Ka waran xiriirka hadda ka socda 2020 ee xashiishadda, CBD ee xayawaanka rabaayadda ah iyo daawada xoolaha ee casriga ah
Ka waran horumarka agagaarka CBD ee xayawaanka maanta? Mareykanka iyo dalal kale oo badan, labada eeyo ...
Maalinta Xayawaanka Adduunka: ka warran CBD xayawaanka rabaayadda ah?
4 Oktoobar 2020
Ma ogtahay in Oktoobar ay tahay Bisha Qaranka ee CBD? CBD waxay si aad ah caan ugu tahay caan ku ahaanshaha guryaha fayoobaanta badan iyo malaayiin ...
(xayeysiin) Saliida CBD ee bini'aadamka waxay ahayd dhammaan xanaaqa sanadihii la soo dhaafay. Tani maahan wax lala yaabo markii aad tixgeliso inta wanaagsan ...
Maroodiyaasha Afrika waxay ku helaan daawada CBD magaalada Warsaw
Beerta Warsaw waxay toddobaadkan ku dhawaaqday inay tijaabo ku sameyso soo saaraha saliidda CBD Dobrekonopie. “Waxaan bilownay mashruuc ...
Waa maxay saamaynta saliida CBD ku leedahay bisadaha?
Laga soo bilaabo dukaamada quruxda ilaa dukaamada xayawaanka, alaabada CBD meel walba way yaalaan. Xayawaanku, sida annaga oo kale, waxay ku qalabaysan yihiin nidaam endocannabinoid ah, oo awood u siinaya cilmi-baarayaasha hoggaaminaya iyo ...
Cilmi baarayaal ka socda Baylor College of Medicine oo kaashanaya Medterra CBD ayaa sameeyay daraasadihii ugu horreeyay ee saynis ah si ay u baaraan daaweynta ...
Waxbarashadu waa muhiim, gaar ahaan hemp oil iyo CBD oo loogu talagalay xayawaanka.
Ku wargalinta milkiilayaasha xayawaanka ah nidaamka endocannabinoid iyo faa'iidooyinkiisa ayaa muhiim u ah keenista suuqa ...
cannabis, CBD, Caafimaadka
Sababtoo ah dareenkooda ur ee xoogan, eeyaha ayaa mararka qaarkood dhakhaatiirtu u adeegsadaan inay ku ogaadaan cudurada. Tusaale ahaan si loo ogaado kansarka.
cannabis, CBD, Wararka, Nafaqeyn
Cannabidiol ama CBD waa meel walba maalmahan. Waxaa sidoo kale si fiican uga dhex muuqda boqortooyada xayawaanka. Eeyaha, bisadaha, xayawaannada kale iyo fardo waa inay ...
Malaayiin dad ah ayaa ka raadiya CBD barta Google si ay wax uga bartaan - 3 waxyaabo ay tahay in la ogaado
Maraykanka - CBD wuxuu ka mid yahay baaritaanada ugu sareeya ee la xiriira caafimaadka, oo ay weheliso 'cuntada', 'sigaarka elektarooniga ah' iyo 'yoga' - baarayaal ayaa dhowaan la helay.
Maalinta xayawaannada adduunka: muxuu saliidda CBD ku sameyn karaa caafimaadka xayawaanka?
4 Oktoobar 2019
Maxay si sax ah u yihiin faa'iidooyinka isticmaalka alaabooyinkan guud ahaan, gaar ahaan xayawaankaaga xayawaanka ah? Fahmitaanka ...
Willie Nelson waxay la timid khad ay leedahay shey xashiishad u gaar ah oo leh CBD xayawaanka
Halyeeyga dalka (iyo soo saaraha xadhkaha xashiishadda Kush) Willie Nelson ayaa soo bandhigay ganacsigiisa cusub ee adduunka.